47 Responses to “ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း”
အဲဒါလေးကို ဖော်ဝပ်မေးလ်ကနေ ဖတ်ဖူးတယ် ချောရဲ့၊ ခု ချောရေးထားတာလေးကတော့ ပိုပြီး ဖတ်ကောင်းတာပေါ့။ ဟုတ်တယ် အိမ်ထောင်သည်တွေဟာ သူတို့ ၂ယောက်ကြားက အချစ်ကို အမြဲ နွေးထွေးနေအောင် ဂရုစိုက်သင့်တယ်....ဖတ်ပြီးသားပေမဲ့ ဖတ်ကောင်းတဲ့ စာလေးတပုဒ်ပါပဲ.....
သတိထားသင့် ဆင်ခြင်သင့်တဲ့ ပြရုဒ်လေးပါပဲ
ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိတဲ့ သဘာဝလေးကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်သာစေပါတယ်
ပေါ့ပေါ့တန်တန်လို့ သဘောထားတာလေးတွေက အချိန်ကြာတာနဲ့အမျှ သွေးအေးသွားသလို
မျိုးလေးတွေ ဖြစ်လာတတ်ကြပါလားလို့ မြင်မိပါတယ်.....
what the romantic story....
we dun feel the obsession when we have it,,
but by the time we r gonna loose it.. we may feel that it is so valuable...
Nice post... and i love that u r starting to try long novels.
သတိထားရတော့မယ် ၊ သတိထားရတော့မယ် ၊ကျေးဇူးပါ ချောရေ
one is 99Snay. I already read.
satisfied to read every time.
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ မမရယ်။ ဒါပေမယ့် ကေသီ့ယောကျာ်းကို မုန်းတယ်။ သူ့အတ္တ၊ သူ့စိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ခုအတွက်ပဲ သိတယ်။ ကေသီမို့လို့ တစ်လစာအတွက် တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုနေသေးတယ်။ ချက်ချင်းကွာပစ်လိုက်ပြီးရော....။ အဆုံးသတ်လေးက လှပကြည်နူးစရာကောင်းပေမယ့် ကေသီ့ဖက်က အများကြီး ပေးဆပ်အနစ်နာခံလိုက်ရတယ်။း((
အနှစ်သာရ အပြည့်အ၀ရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါဘဲ။ သေချာကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ချောရဲ့ အားထုတ်မှုနဲ့ ချောပေးချင်တဲ့ message လေးကိုရလိုက်ပါတယ်။
မိသားစုရှိသူတိုင်း ဂရုပြုသင့်တဲ့ အချက်လေးကို ဒီပို့စ်လေးက မီးမောင်းထိုးပြလိုက်သလိုပါနော်။
မချော... ဒီpost လေးကို အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ အမှန် လင်မယားလို့ ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အလုပ်တွေများရင်း လျစ်လျူရှုသလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ထိုအခါ အချစ်တွေလည်း အေးစက်လာပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး အမြဲသာယာနေဖို့ မိသားစု ပျော်ပွဲစားထွက်တာတို့၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချီးမွမ်းပြောဆိုတာတို့၊ အရင်တုန်းက အကြောင်း ပြန်ပြောတာတို့တွေ အမြဲလုပ်သင့်ပါတယ်လို့ ၀တ်ရည်တော့ ထင်တယ်..
စာလေးကိုကြိုးစားပြိး ပြန်သွားတာရော... စာလေးရဲ့ အနှစ်သာရလေးကိုရော သဘောကျမိပါတယ်ခင်ဗျာ...
“မောင်တို့ ၂ယောက်လုံး အိုမင်းလာတဲ့အချိန်ထိ မောင် မင်းကို ပွေ့ချီသွားမှာပါ.” ....
အဲဒီအခါကျရင် Refresh လုပ်တဲ့အနေနဲ့ နယ်ကို အပျော်ခရီးထွက်တာမျိုး..မကြာခနလုပ်သင့်တယ်လို့ ကြားဖူးတယ်...။
တချို့ကျတော့လည်း သားသမီးသံယောဇဉ်နဲ့ထိန်းထားကြတယ်လို့ ဆိုပြန်တယ်...။
မှားပြီးသား ခြေလှမ်းတွေကို ခွင့်လွှတ်လက်ခံနိုင်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို လေးစားချီးကျူးပါတယ်။
တော်သေးတာပေါ့ အစ်မရယ် ပြန်ပေါင်းသွားကြလို့ စိတ်ကိုမောရောပဲ ဖတ်ရတာ။ ရေးထားတဲ့လူကတော်တာလည်းပါတာပေါ့ :)
အဆုံးသတ်လေးက ကြည်နူးစရာလေးပါပဲ။ အိမ်ထောင်သည် မိသားစုတိုင်း ဂရုစိုက်ရမဲ့
အချက်လေးပဲ။ ဒီပို့ စ်အတွက် ကျေဇူးပါနော် ။
“ချစ်သူတိုင်း နားလည်စာနာခြင်း၊ နွေးထွေးယုယခြင်း၊ ချစ်ခင်ကြင်နာခြင်းတို့ဖြင့် တွဲလက်ခိုင်ခိုင် မြဲနိုင်ကြပါစေရှင်။”..မမချောနဲ့ထပ်တူဆုတောင်းပေးသွားတယ်။
အင်ဂျင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော့်ညီမလေးပြောသွားတာလေးကိုသဘောကျလို့အသံထွက်ပြီးရယ်မိတယ်......။ တစ်ကယ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်.....။
ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်တောင် ကျချင်တယ် တော်ပါသေးရဲ့နော် ပြန်လည် ပေါင်းစည်းသွားကြလို့ ယောက်ကျား တွေများ မကောင်းလိုက် ကြတာ နာနာရိုက်ဘို့ ကောင်းတယ် ဟိုအပေါ်က လူပျိုကြီးကိုဏီ သတိထား (ဘာမှ လည်း မဆိုင်ဘူး)
အဟမ်းးး အဟမ်းးး အပျိုကြီးရေ အဆုံးထိ ဖတ်သွားတယ်သိလား
မစနေ တခါဘာသာပြန်တာရှိတယ် ဖတ်ဖူးတယ် ထပ်ဖတ်တယ် ဘာဖြစ်လဲ ဟွင့် တာ့တာ
အချစ်စစ်နှင့်အချစ်တုကို နှိုင်းယှဉ်ပြပေးလိုက်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပါဘဲ။ ကေသီ့ကို ကွာရှင်းဖို့ပြောလိုက်တော့ ကေသီက အေးအေးဆေးဆေးဘဲ ပညာသားပါပါနဲ့ ခွင့်လွတ်ပေးတယ်။ ဂျူလီကို အတူမနေနိုင်တော့ကြောင်း သွားပြောတော့ ပါးရိုက်ခံရတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြီး အိမ်ထောင်သည်များ သင်ခန်းစာယူစရာပါ။
မချော...ဆုတဲ့ ပေးတဲ့ ပြည့်ပါစေ
အဆုံးသတ်မှာ နားလည်မှုတွေနဲ့အတူ အချစ်သစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားသွားခဲ့ပြီပေါ့။
အဆုံးသတ်လေးကိုဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ သိင်္ဂါရ ရသလေးကို ရရှိလိုက်ရတာမို့ စာရေးသူကိုကျေးဇူးအထူးပါ။
အခုနောက်ပိုင်း ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း ဆိုတာ မဆန်းတော့သလိုဖြစ်နေတဲ့ကာလထဲ မမရဲ့ စေတနာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။တကယ်ကောင်းပါတယ်။ အားလုံးသော အိမ်ထောင်သည်များ အချစ်လိုသူနဲ့အချစ်ပေးသူ ထပ်တူကျစွာ ထာဝရငြိမ်းချမ်းစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်။
အဲဒီဝတ္ထူလေးဖတ်လာရင်း ဖတ်လာရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်းသတိရသွားတယ်
အမရ ကျွန်တော် forward mail မှာတခါဖတ်ဖူးတယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်
ဆုံးအောင်ထပ်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် သိပ်ကောင်းတဲ့ ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ပါ အမှန်ဆို
လင်မယားနှစ်ယောက်က မချစ်တော့တာ မကြင်နာတတ်တော့တာမှ မဟုတ်တာ
ဝေးကွာမှုလေးတွေများလာတော့ သွေးအေးလာကြတယ် ထင်ပါတယ် ကြင်စဦးလို ပုံရိပ်လေးတွေ သတိရသွားကြတော့ အချစ်တစ်ဖန် မွေးဖွားဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ :)
မချော အရမ်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပဲ ကျွန်တော် သိပ်ကြိုက်တယ် ကျွန်တော်တို့တွေ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်လာတဲ့ တစ်နေ့ အဲဒါလေးတွေ သတိထားဖို့ လိုအပ်ကြမှာပါ . . .
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဘာသာပြန်ပို့စ်လေးပါပဲ မချော
သိပ်ကောင်းပါတယ် မမ.. အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက် သတိထားသင့်တာတွေပေါ့နော်..
ကျွန်တော် နောက်ဆုံး မှ ရောက်ဖြစ်ခဲ့ တာ ကို ခွင့် လွှတ် ပေးပါ။
နောက်ဆုံးမှ လာဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့အကြောက်ဆုံး ၊ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး
ခံစား ချက် ကို ခံစား မိခဲ့ ပါတယ်လေ၊
လုပ်ချင် တာနဲ့လုပ်သင့်တာ ကို ဦးစား ပေး ရွေးချယ် သွား တာ ကိုလည်း
လေးစား မိ ပါတယ်ဗျာ ။
စာ ပြီး နာ ခဲ့မိပါတယ် ။
Aung Minn said...
Very nice post, I love it. Thanks
တာဝန်အရ ခင်ပွန်းသည်နဲ့ ခဏခွဲနေရတဲ့၊
အွန်လိုင်းမှာ တစ်ချိန်လုံး သာယာနေတဲ့၊
ကျမ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဇနီးကို
ကေသီနဲ့ သူ့အမျိုးသားနဲ့ ထပ်တူ နောက်ဆုံးတစ်လရဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ရက်ရဲ့ ခံစားမှုကို ထပ်တူထပ်မျှခံစားမိပါတယ်...။ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းမတိုင်း သတိမူပြီး ပြုမူသင့်တဲ့ ကေသီရဲ့ နောက်ဆုံးတောင်းဆိုမှုပါ...။ လိုက်လျောပေးတဲ့ ကေသီယောင်္ကျားကိုလည်း ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်..သူသာ မလိုက်လျောရင် အဆုံးသတ်က ဒီလိုဖြစ်မလာပါဘူး.... တစ်မျိုးခံစားရမယ်ဆိုရင်တော့..ကေသီဟာ ပညာရှိနည်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ယောင်္ကျားကို ပြန်လည်သိမ်းသွင်းသွားတာပါပဲ...။ ကေသီတော်တယ်...။
ဒီဇတ်လမ်းလေးကို ဘာသာပြန်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟိုနေ့ကတည်းက ဖတ်ပြီးပြီ၊ အလုပ်ရှုတ်နေလို့ ကွန်မန့်မရေးဖြစ်တာ၊
အိမ်ထောင်သည်တိုင်းသတိထားရမှာ၊ ယောက်ျားလေးရော မိန်းကလေးရော၊
သွေးအေးတတ်သည် သတိ :)
မမချော... ရေ ဒီပို့စ်လေး အတွက် ကျေးဇူးနော် ညီမလေးလဲ သက်ဆိုင်သူကို ပေးဖတ်ချင်လိုက်တာ ဟိဟိ ချက်ချင်း လက်မနှေးပဲ ပို့ပေးလိုက်တယ်... အရင်က မမ တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ပေးဖတ်တုန်းက သူ့ဆီက မမျှော်လင့်တဲ့ တုန့်ပြန်မှု ပြန်ရလို့လေ (ပျော်လိုက်တာ အဲ့တုန်းက).. ဒီပို့စ်အတွက်လဲ ကောင်းသော တန်ပြန်မှု ကိုပြန်ရပါစေလို့ မမျှော်လင့်ရဲပါဘူး ... သူနဲ့ ခံစားချက်ချင်း တိုက်ဆိုင်ရင်တောင် ကျေနပ်ပါတယ် ... :)
မမ ချောကို ချစ်တဲ့ (ဆောင်း)
Myo Zaw Lwin said...
သူပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ သူ့မိန်းမ suicide လုပ်ပြီးသားတွေ့လိုက်ရရင် ဘယ်လိုနေမလဲလို့ဇတ်အိမ်ကို ပြောင်းပြီး စဉ်းစားမိတယ်။
တို့အနေနဲ့သာဆိုရင် အဲသလို ထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သူဟိုဘက်ကို ပြတ်စဲကြောင်း သွားပြောတယ်မထင်ဘဲ ကိုယ့်ကိုထားခဲ့တယ်လို့ထင်ပြီး သတ်သေပလိုက်မလားလို့ စဉ်းစားမိတယ။်
အချစ်ဆိုတာလည်းခက်သားလား ဘယ်သူ့ကိုမှအပစ်တင်လို့မရပါဘူး မိန်းခလေးဘက်ကကြည့်တော့လည်း မိန်းခလေးမှန်တာပဲ ယောက်ကျားလေးဘက်က ကြည့်တော့လည်း မှန်တာပါပဲ အပစ်တော့မရှိဘူးလို့ထင်တယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေစဉ်အချိန်တုန်းက တခုရှိရင်တယောက်တ၀က်စားလို့ ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူအချင်းချင်း ဒါမောင့်အတွက် ဒါချစ်အတွက်နဲ့ ချစ်သူတွေဘ၀မှာ ချစ်နေဖို့တခုပဲရှိတာလေ အဲဒီချိန်မှာတော့ မိန်းခလေးရော ယောက်ကျားလေးရော ချစ်ဖို့၊ကြင်နာဖို့၊ ဂရုစိုက်ဖို့၊ မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံဖို့ပဲ တွေးကြတယ်လေ ဒီအချိန်မှာတော့ ဒါပဲလုပ်စရာရှိတာကိုး အဲအိမ်ထောင်ပြုကြပီ မတူညီတဲ့ဘ၀နှစ်ခု မိသားစုနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ကြပီဆိုရင်တော့ လာပီလေအခက်ခဲတွေ နောက်ပီဘ၀တခုကို တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာမင်းကိုမောင်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးတခုတည်းနဲ့ ထမင်းစားလို့မှမရတာ အဲတော့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ် လုပ်ရတာနဲ့အမျှ အရင်လိုသူ့နားမှာအချိန်တွေမပေးနိုင်တော့ဘူး နောက်ဝန်ခံချင်တာတခုရှိပါတယ် အိမ်ထောင်ရေးပြသနာတွေတိုင်းမှာယောက်ကျားလေးဘက်ကပဲ စပီးဖောက်ပြားတတ်တာများပါတယ် များတယ်လို့ပဲပြောတာနော် ဆိုလိုတာကအိမ်ထောင်ကျသွားပီ ဆိုရင်မြန်မာအပါအ၀င် အရှေ့တောင်အာရှက မိန်းခလေးတော်တော်များများက (ကျွန်တော်ထင်တာလွဲရင်လည်းခွင့်လွတ်) မိသားစုဘ၀ကို ပုံအပ်လိုက်ကြတာများတယ် အဲတော့ယောက်ကျားလေးကပဲအပြင်ကိုထွက် လူအများနဲ့ဆက်သွယ် အဲတော့ ဘယ်အိမ်ထောင်ရှင်မဆိုထားနဲ့ လူလွတ်တောင် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ကင်းကွာလာတဲ့အခါ နောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆက်ဆံရတာကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်တဲ့ မိန်းခလေးမျိုးတွေနဲ့ အနီးကပ်တွေ့ဆုံရတဲ့အခါ (ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်) စိတ်ကစားမိနိုင်ပါတယ် အဲမိန်းခလေးကလည်း ကိုယ့်ကိုမိသားစုနဲ့မခြား ဂရုစိုက်ကြင်နာပေးတဲ့အခါ မိသာစုမှာလည်း နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ မိသားစုတာဝန်တွေနဲ့ ပိနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ အကြင်နာတွေ ဝေးကွာသလိုဖြစ်နေတဲ့အခါ ဖောက်ပြားတာမဟုတ်ဘူးနော် ပထမက စိတ်သာယာသွားတာ အဲနောက်မှ မလိုလားအပ်တာတွေ ဖြစ်ကုန်တာ ပြသနာတခုက မဖြစ်ခင် သတိထားမိမှ မထားမိလိုက်ရင် နောက်ကတန်းစီပီးတက်တာ အဲတော့ အပစ်မြင်ကြကျေးဆိုရင်တော့ ယောက်ကျားလေးဘက်ကိုပဲ အပစ်မြင်ကြမယ် မိန်းခလေးများကြည့်ရင်ပါ မှားတယ်လည်းမဆိုသာပါဘူး မှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ မိန်းခလေးဘက်ကလည်း သတိထားပီး နေထိုင်စရာလေးတွေ ကြင်နာမှု့တွေ နွေးထွေးမှု့တွေ နှစ်တွေကြာတိုင်းလည်း လျှော့မသွားပဲ (သားသမီး မိသာစုတာဝန်တွေ) ပင်ပန်းနေလည်း ကိုယ့်အိမ်သားကို ကြင်နာမှု့တွေ ပေးနိုင်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ် ယောက်ကျားလေးကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလိုမျိုးကြုံလာရင် ရှောင်ဖို့ခက်တယ်လို့ ၀န်ခံပရစေ.. အဓိကကတော့ ချစ်သူတွေဘ၀မှာရော အိမ်ထောင်တခုမှာရော သွေးမအေးဖို့နဲ့ နားလည်မှု့ရှိဖိုပဲ အရေးကြီးဆုံးပါလို့ ထင်တယ် (နားလည်မှု့) အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် အားလုံးနားလည်မှု့ကိုယ်ဆီ ထားနိုင်ကြရင် ဘာမှစိတ်မချမ်းသာစရာ ဖြစ်စရာမရှိနိုင်ပါဘူး အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပြသနာဆိုတာဖြစ်လာရင် မိသားစုအတွက် ကိုယ့်အမျိုးသားအတွက် စိတ်နှစ်ပီး ဘ၀ကိုပုံအပ်လိုက်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးများကို ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူး အစဉ်လဲလေးစားပါတယ်လို့ ဒီနေရာကပြောချင်ပါတယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်စာက ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်
စောစောကကျန်သွားလို့ပါ (ကျွန်တော်စာကဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် ရှည်လည်းရှည်သွားတဲ့အတွက်ခွင့်လွတ်ပါ မိသားစုကိုပုံအပ်လိုက်သောမြင့်မြတ်သောအမျိုးသမီးများကိုလေးစားလျှက်)
Nice to feel about Love ....
အချစ် ... သူကို ခုတုံးလုပ်သူ သိပ်များတယ် ။
ကိုယ့်စိတ်ခံစားမှု သက်သက်ကိုသာ ဦးစားပေးနေသရွေ့ အချစ် ဆိုတာ ဝေ၀ါးနေအုန်းမယ်ထင်တာပဲ ။ အချစ်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ဖောက်ပြန်သူကော ဖောက်ပြန်တာကို လက်ခံသူကော မုန်းတယ် ။
ညီမလေးလဲ ဒီစာကို ဖတ်ဖူးတယ် မေးလ်တွေထဲမှာပေါ့ ။
It's grate but some are quite different, it may so much happening in human life.
lain lain said...
ဒီစာလေးကြောင့်ကျမ အမျိုးသားဆီက အသိတစ်ခုရသွားခဲ့လို့အရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်..ကျမလေ ကေသီလိုဘ၀မျိုး ရောက်လုဆဲဆဲပါဘဲ.. ချုပ်ချယ်တာမကြိုက်တဲ့ခင်ပွန်းကို ကျမအရမ်းချုပ်ချယ်သလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျမလည်း ဆင်ခြင်မိသွားတယ်... ထွက်ပေါက်ရှာမိတဲ့သူ့ကိုလည်း နားလည်သွားမိတယ်. ကေသီ့ခင်ပွန်းလိုဘဲ ကျမခင်ပွန်းလည်း အမှန်တရားတစ်ခုကို တစ်ဘ၀လုံးစာအတွက် ရှာတွေ့သွားနို်င်တဲ့ဒီစာလေးကို သူဖတ်မိသွားလို့ပေါ့.. သူဖတ်ပြီးချိန်မှာဘဲ ကျမဆီကိုဖုန်းဆက်ပါတယ်... အရင်က ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်တိုင်းက ကွာရှင်းဖို့ အစပျိုးခဲ့တာတွေအစား သူ့ဆီက ကြင်နာတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်း ကြားလာရတယ်... သူကကျမရဲ့ဘ၀ပါဘဲ. ချစ်သူက်တမ်း ၆နှစ်ကြာမှ လက်တွဲခဲ့တဲ့ ကျမတို့အတွက် ဒီလိုအေးစက်မှု့မျိုးက ကျမကို အချိန်တိုင်း ခြောက်လှန့်နေခဲ့ပါတယ်..
မကြီးချောရေ အခုမှဘဲ သေချာဖတ်ဖြစ်တော့တယ်။ ဒီထဲကလိုဘဲ တစ်ယောက်ကလည်း ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်မယ်၊ တစ်ယောက်ကလည်း ပြန်ပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့...ဒါပေမယ့် မခံစားနိုင်ဘူး...ကိုယ်ဆိုရင်တော့ သူများရောက်သွားတဲ့သူကို ပြန်လက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာ 90% မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ် ...
ဟုတ်တယ် မချောရေ အဲ့လိုမိသားစုတွေမနဲရှိမယ် thank you.လက်ရာမြောက်တယ်ဗျာ
after i read this , i called n tell my husband that i love him so much.
i haven't tell him for along time. thank u so much for remind me.
cheap hotels iin taipei said...
Cheap hostel for backpackers in Taipei. Print this post and claim your ten percent discount. Welcome to my hostel.